မမချွိ ဖျားနေသည် – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မမချွိ ဖျားနေသည် – KZ’s ထမင်းဆိုင်	20
Posted by ဇီဇီ on Jul 20, 2016 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, How To.., My Dear Diary, Society & Lifestyle | 20 comments
ဖျားနေတာမို့ လူမမာဟင်းလေးတွေ ခေါင်းထဲပေါ်တုန်း ချရေးထားရမလား စိတ်ကူးတယ်။
မြန်မာ အယူအဆ ကတော့ ထမင်းက အဖျားအားပေးတာတို့ ဘာတို့ ဖျားနေရင် အစားပျက်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အဟိ။
တညားကတော့ အစာအိမ်ပတနာ တက်နေတုန်းကလွဲရင် အစားအသောက်သိပ်မပျက်လှဘူးး…
ဒီ က ဆရာဝန်တွေက ဖျားလို့လည်း အစားမရှောင်ခိုင်းဘူးး စား ဆိုတာချည်းပဲ။
အစာအိမ်တို့ အူယောင်တာတို့ မနွယ်တဲ့ အဖျားအတွက် အစားရှောင်စရာမလိုပါဘူးး
အန်တီဘိုင်အိုတစ်တွေ သောက်ရရင်တော့ ခံတွင်းက ပျက်တတ်တာပေါ့။ ကွကို စားကောင်းအောင် လုပ်စားရင်းနဲ့ အစားမပျက်တာတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မတုန်းး၊ အဟွတ်။
အာဟာရပြတ်မှာ စိုးလို့ ဘားးးး ကြိုးစား စားနေရဒေ။
၁) ကြက်စွပ်ပြုတ်၊ ငါးပုတ်ခြောက် ဖုတ် သံပုရာရည်ဆမ်းး
ဖျားပြီဆိုတာနဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်ဟာ ဖော်မြူလာပါပဲ။ ကွကိုယ် ဖျားနေတောင် ထပြုတ်လို့ရအောင် လွယ်လို့ပါ။
ရှိတဲ့ ကြက် ၃ တုံးလောက်ကို တစ်ယောက်စာ စွပ် တစ်ခွက်ရရုံ ရေထည့်၊ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ပြားရိုက်ထည့်၊ ချိုချင်ရင် ကြက်သွန်နီ လေးစိတ်ကွဲပါပစ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီ အရည်ပျော်တဲ့ထိ အရည်ကို တစ်ပန်းကန်စာ လောက်ပဲ ထိန်းတည်ရင် အတော်အရသာရှိတဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်ရပါပြီ။ ဆားနည်းနည်းနဲ့ ငရုတ်ကောင်းနည်းနည်းကို သောက်ခါနီးမှာ ထည့်ပြီး မီးဖိုပိတ်ပါ။
ငါးပုတ်ခြောက် အသားမွမွချည်းကို သံပုရာသီး စိမ်း အရည်စစ်စစ်ညှစ်ပြီး စိမ်ထားတာလေးနဲ့ ထမင်းဖြူလေးနဲ့ ရှောကနဲ ဝင်တာမြန်း ၂ ပန်းကန်လောက်ပဲ။ ဘုရားစူးဖျားနေတာ။
၂) ငါးပြုတ်ချဉ်စပ်နဲ့ ငါးကြော်
ကိုယ်ကတော့ ငါး အရိုးအသားတွဲတဲ့ အပိုင်းကို ငံပြာရည်ဂျင်းနဲ့ စပါးလင်နဲ့ပြုတ်ပြီး အရည် တစ်ခွက်စာကျန်ချိန်မှာ ငရုတ်သီးစိမ်းဖင်ခွဲထည့်ပြီး သံပုရာသီး အရည်ချည်း ညှစ်ထည့်တာ တစ်လုံးလုံးး၊
ကျန်တဲ့ အသားတွေကို ဆားနည်းနည်း ဆနွင်းများများနဲ့ နယ်ပြီး ကြော်လိုက်တာ။
ထမင်းကို ငါးကြော်ဆီနဲ့ ဆားနဲ့နယ်ပြီး စားလိုက် ဟင်းရည်သောက်လိုက်နဲ့ ထမင်းဝင်လွန်းလို့ နေမကောင်းဘူး မထင်ဘူးး၊ ဖုတ်ဝင်နေတယ် ထင်ကြတယ်။
၃) ဝက်ရိုးမုန်ညင်းရည် နဲ့ ငပိထောင်း
ဝက် အရိုးအသားရောကို ပဲငံပြာရည် အကြည် နဲ့ ဂျင်းပဲထည့်တည်ထားး၊ ဆူပြီး ရေကျရင် မုံညင်းရွက် ရေဆေးပြီး ခတ်လိုက်တာပဲ။ ခက်တာလိုက်လို့။
ငပိကို ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ အရင်ထောင်းပြီးမှ မီးဖုတ်တယ်လေ။ ပလော်ပလန်? မတူးပြီးတာပဲ။ မီးကင်ပြီး ငပိကို ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ မညက်တညက်ရောထောင်းတယ်။ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ညက်အောင်ထောင်းရတာ ပင်ပန်းလို့။
အာ့ဒါကို ဆီစိမ်း စိမ်ထားလိုက်တယ်။
စားခါနီးမှ ခူးခပ်ပြီး သံပုရာသီးလေးတစ်ခြမ်း လှီးထားပြီး ဇွန်းထဲ ထမင်းရယ် ငပိထောင်းရယ်ကို သံပုရာသီးလေး တစ်စက်ညှစ်လိုက် စားလိုက် ဟင်းချိုရည်လေး သောက်လိုက်နဲ့ ဘေးက ကြည့်ရင် ဘယ်လိုမှ ဖျားနေတဲ့ ပုံမပေါက်ဘူး သလားး
၄) ကြက်သားပြုတ်ကြော် နဲ့ ပဲကြမ်းသုပ်
ရှိတဲ့ ကြက်သားကို ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း တစ်ပြားရိုက်ရိုက်၊ တစ်တုံးထုထု ရော၊
ဆားနည်းနည်း၊ ဆနွင်းများများထည့် နှံ့အောင်နယ်။ ဆီထည့်၊ ရေထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ နီ အရည်ပျော်တဲ့ထိ ရေထည့်ထည့်ပြီး တည်နေ။
နောက်ဆုံး အရည်ပျော် အကုန်ပျောက် ကြက်သားနဲ့ ဆီပဲ ကျန်ချိန်မှ မီးပိတ်ထား။
ရှိတဲ့ ပဲကြမ်းတွေကို ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီးရော၊ ကြာညို (ပဲငံပြာရည် အနောက်) ထည့်နယ်။
သံပုရာသီးကို ချဉ်နေအောင် ညှစ်။ ချဉ်ချိုစပ်ငံ အရသာ ရချိန်မှာ
ထမင်းဖြူကို ကြက်သားပြုတ်ကြော် ဆီနဲ့ နယ်ထားတာနဲ့ အဲဒီ အသုပ်နဲ့ စား၊ ရေနွေးလေး သောက်နေရရင် ထပ်ဖျားချင်စိတ် ပေါက်သွားမယ်။
၅) မြူစွမ်ပြုတ် နဲ့ ငါးဖယ်ကြော်
ကြာဇံရှိရှိ၊ မြူစွမ်ရှိရှိ၊ ငါးကလေးခြောက် ရှိရှိ ငါးကလေး အစိုရှိရှိ ကြက်သွန်နီ ဂေါ်ဖီလေး ပါးပါးလှီးထည့်ပြီး ပြုတ်။
မြူစွမ်မပျော့မမာ အနေအထားမှာ ငါးဖယ်ပြုတ်ထားတာလေးရှိရှိ၊ ကြော်ထားတာလေး ရှိရှိ ညှပ်ထားပြီး တွဲစားရင် ထမင်းလွတ်တာပေါ့။ ဟိ
ဒါတွေက စွပ် နဲ့ စားဖြစ်တာတွေ ချည်းပဲ။
တညားက ဆန်ပြုတ်လုံးဝမကြိုက်လို့ ရွာထဲက ချစ်မမနဲ့ မွဝေရဲ့ ဆန်ပြုတ်နည်းတွေပဲပေးလိုက်တော့မယ်။
ဆွေမျိုးမေ့ဆန်ပြုတ် (http://mandalaygazette.com/36487 Posted by Ma Ma on Dec 13, 2010)
ကြက်သားကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ဂျင်းနဲ့ ဆားအနည်းငယ်များများ ထည့်နယ်ပြီး ခဏထားပါ။
ကြက်သားကို နူးအိနေအောင် မပြုတ်ရပါ။
ဆန်ကိုရေဆေးပြီး ဆူနေသော ကြက်သားပြုတ်ရည်ထဲကို ထည့်ပြုတ်ပါ။
တရုတ်လို တုံဆိုင် (မုန်ညှင်းဖြူထုပ်ကို အခြောက်လှမ်းထားတာထင်တယ်။ သံဈေးမှာ ၀ယ်လို့ရတယ်။) ကို ပါးပါးလှီးပြီးထည့်ပြုတ်ပါ။
သို့မဟုတ် ပွဲပြင်တော့မှ အပေါ်က ထည့်ဖြူးစားလျှင်လဲရပါတယ်။
အရသာ အဆင်ပြေအောင် ဆားကို သင့်တော်သလို ထပ်ထည့်ပါ။
ပြီးလျှင် ကြက်သွန်ကြော်နှင့် နှမ်းလှော်တို့ကို သီးခြားစီ မှုန့်အောင်ထောင်းပါ။
ပွဲပြင်လျှင် ကြက်သား။ ကြက်သွန်ကြော်မှုန့်၊ နှမ်းလှော်မှုန့်ဖြူးပြီး နှမ်းဆီမွှေး အနည်းငယ်ဆမ်းပါ။
ကြိုက်တတ်လျှင် တရုတ်နံနံ၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ကို ထည့်စားနိုင်ပါတယ်။
ဆန်ပြုတ်မသောက်ခင်ဆွေမျိုးစာရင်း အရင်ပြုစုထားဖို့ လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
Wei Wei ရဲ့ ဆန်ပြုတ် အစီအစဉ် (http://mandalaygazette.com/189215)
ကြက်သားဆန်ပြုတ်၊ ကြက်သားသုတ်နဲ့ ကြက်သဲမြစ်သီးရွက်စုံ အစိမ်းကြော်
ကြက်သားဆန်ပြုတ်အတွက် ရှမ်းဆန် နို့ဆီဗူးတစ်ဗူးကိုဆေးပြီး ရေများများနဲ့ အရင်ပြုတ်ပါတယ်။
ဗမာကြက် ခပ်သေးသေးကို တစ်ကောင်လုံးဝယ်ထားပြီး နှစ်ခြမ်းခြမ်းပြီးဆားနဲ့နယ်ထားပါမယ်။
ဆန်ပြုတ်အိုး စဆူလာတာနဲ့ ကြက်သားကို ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါမယ်။
ကြက်အားလုံးထည့်လိုက်တာက ကြက်အချိုရည်နဲ့ ဆန်ပြုတ်ချိုသွားအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
၁၅ မိနစ်လောက်ပြုတ်လိုက်ရင် ကြက်သားနူးသွားပါလိမ့်မယ်။
ကြက်သားတွေကို ပြန်ဆယ်ပြီး အအေးခံပြီး အသားနွှာပါတယ်။
အရိုးတွေကို အိုးထဲ ပြည်ထည့်ပြီး ဆက်ပြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အသားတစ်ဝက်ကို သေးသေးလေးတွေတုံးပြီး အိုးထဲပြန်ထည့်ပြုတ်ပါတယ်။
ကျန်တစ်ဝက်ကိုတော့ အမျှောင်းလိုက်အရှည်လှီးပြီး အသုတ်သုတ်မယ်။
အသုတ်အတွက် ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ ရှာလကာရည်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ငရုတ်ဆီတို့ကို အသုံးပြုပါမယ်။
အသဲအမြစ်ကို ပါးပါးလှီးပြီး ဂေါ်ဖီ၊ မုန်ညင်းဖြူ၊ ရွှေပဲသီး၊ ဥနီ၊ ပြောင်းဖူး စတဲ့ အသီးအရွက်တွေနဲ့ ကြော်ပါမယ်။
ဆန်ပြုတ်ကျက်တော့မှ စားမယ့်ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ ဆား၊ တို့ကို ထည့်ပါတယ်။
2. သတ်သတ်လွတ်စားရမှာမို့လို့ ဆန်ပြုတ်ကို ပဲနဲ့ ပြုတ်ပါမယ်။ ပဲပြားကြော်သုတ်၊ ဟင်းနူးနွယ်ရွက်ကြော်တို့နဲ့ တွဲဖက်စားပါမယ်။
ကျွန်မဆီကို ခဏလာလည်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပဲဆန်ပြုတ်နဲ့ကြုံသွားခဲ့ဖူးတယ်။ သူက အဲဒီဆန်ပြုတ်ကိုကြည့်ပြီး တခြားဘာမှစားစရာမရှိရင် အငတ်ခံပါ့မယ်တဲ့ … ဒီဆန်ပြုတ်တော့ မစားပါရစေနဲ့တဲ့ .. အဲဒီလောက်တောင် အားပေးခဲ့တဲ့ ဆန်ပြုတ်..
အခွံအဖြူနဲ့ ထောပတ်ပဲအခြောက်ကို တစ်ညကြိုတင်ပြီးရေစိမ်ထားပါတယ်။
ပွလာတော့မှ အခွံခွာပြီး ရေထပ်စိမ်ထားပါတယ်။
ရေနဲ့ဆန်ပြုတ်ထားတာ ဆူပြီဆိုတာနဲ့ ပဲကိုထည့်ပြုတ်လိုက်ရင် ဆန်နူးတဲ့အချိန်မှာ ပဲလဲနူးပြီး ပုံစံမပျက် ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
အရသာအပေါ့အငံမြည်းပြီး ဂျင်းနဲနဲထည့်လိုက်ရင် စားလို့ရပါပြီ။
3. ငါးရံ့ဆန်ပြုတ်၊ ပဲသွေးသုတ်နဲ့ ကြက်တောင်ပံကြော်
ငါးရံ့ဆန်ပြုတ်အတွက် ငါးရံ့ကို အသားလွှာပြီး ပါးပါးလေးတွေ လှီးထားပါမယ်။
ဆန်ပြုတ် ကျက်ကျက်ဆူပြီး စားခါနီးမှမှ ငါးရံ့အသားတွေကို ထည့်ရမယ်။
မုန်လာဥအခြောက် (ဆိုက်ဖေါ့)ကို သေးသေးလေးတွေလှီးပြီးထည့်စားမယ်။
ကြက်သွန်မိတ်နဲ့ ငရုတ်ကောင်းပါ ထည့်လိုက်တဲ့အခါ လျှာလည်သွားပါလိမ့်မယ်။
4. ကြက်ဥဆန်ပြုတ်၊ ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ ကညွှတ်ကြော်
ငါးရံ့ဆန်ပြုတ်လိုပါပဲ … ဆန်နူးနေအောင်ပြုတ်ထားပြီး စားခါနီးမှာ ကြက်ဥကြော်ရိတ်ရိတ်လှီးပြီးထည့်ပါတယ်။
ကြက်ဥကြော်တဲ့အခါ ကြက်ဥကို ခေါက်ထားပြီး မကပ်တဲ့အိုးထဲမှာ ဆီနဲနဲလေးပဲထည့်ပြီး အပြားလိုက်ကြော်ပါတယ်။
ပြီးတော့မှ ကတ်ကြေးနဲ့ ပါးပါးသေးသေးဖြစ်အောင်ညှပ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ရေခဲသေတ္တာထဲ ကြက်သားလဲမရှိ၊ ငါးလဲမရှိတဲ့အခါ ကြက်ဥဆန်ပြုတ်လေးလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
ကြက်သွန်မိတ်ကို အမြဲတမ်းရအောင် ပန်းအိုးထဲထည့်စိုက်ထားလိုက်တယ်။
5. သုံးရောင်ခြယ်ဆန်ပြုတ်၊ ၀က်နားရွက်သုတ်နဲ့ ကြက်ဥလိပ်
ဆန်ပြုတ်ကို ပြောင်းဖူးစေ့ (အ၀ါရောင်)၊ ပဲစိမ်းစေ့ (အစိမ်းရောင်) နဲ့ မုန်လာဥနီ (အနီရောင်) ထည့်ပြုတ်မယ်။
ကြက်သွန်နီကြော် နှစ်သက်လျှင် ထည့်စားနိုင်ပါတယ်။
ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နဲ့ ကြက်သွန်မိတ်ကိုတော့ ဆန်ပြုတ်ပြုတ်တိုင်း ထည့်စားလို့ရပါတယ်။
ကြက်ဥလိပ်အတွက် ကြက်ဥကို ဆားနဲ့သကြားထည့်ခေါက်ပြီး မကပ်တဲ့အိုးထဲ အပြားလိုက်ဖြစ်အောင် အရင်ကြော်ပါမယ်။
အလိပ်လုပ်ဖို့အတွက် အတွင်းအစာအဖြစ် ရေနွေးဖျောထားတဲ့ကညွတ်၊ မျှင်မျှင်လှီးထားတဲ့ မုန်လာဥနီ၊ ဂဏန်းချောင်းကဲ့သလို့ နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုထည့်ပြီး လိပ်လို့ရပါတယ်။
ဓါးထက်ထက်နဲ့ လှီးပြီး ပန်းကန်ထဲ ထည့်ထားလိုက်ရင် လှပတဲ့ ကြက်ဥလိပ်ကို စားချင်စိတ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။
6. ဘဲသားဆန်ပြုတ် အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုပါ အလှူပေးမှာမို့လို့ အိုးကြီးကြီးနဲ့ ချက်ပါမယ်။ အီကြာကွေးကြော်နဲ့ တွဲဖက်စားမယ်။
ဘဲသားခပ်ကြီးကြီးတစ်ကောင်ကို ၄ ပိုင်းပိုင်းပြီး ငံပြာရည်နဲ့နယ်ထားပြီး အိုးတစ်လုံးနဲ့ပြုတ်ပါမယ်။
အသားနူးလာရင် အသားနွှာပြီး သေးသေးလေးတွေတုံးမယ်။
ဆန်နဲ့ရေပြုတ်ထားတဲ့အိုးထဲ ဘဲသား၊ ထုထားသောကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းအနဲငယ်၊ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ ဆီချက်အနဲငယ် ထည့်ပြီး ကျက်ခါနီးမှာ တရုတ်နံနံနဲ့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်မယ်။
ချိုချိုမွှေးမွှေးလေးနဲ့ အိုးကြီးချက်ဆန်ပြုတ်က အရသာတစ်မျိုးကောင်းပါတယ်။
7. ပဲကော (နှစ်တစ်ရာပဲ)ဆန်ပြုတ်၊ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်ရယ် ကင်ချီရယ်
ရေစိမ်ထားတဲ့ပဲကောအစိကို အခွံခွာပြီး ဆန်ပြုတ်ကျက်ခါနီးမှာ ထည့်ချက်လိုက်ရုံပါပဲ။
ခပ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ ခါးသက်သက်အရသာက ခံတွင်းလိုက်စေပါတယ်။
ဒီအတိုင်းစားရင် အငံဓါတ်ရှိတဲ့ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်ကို ဆန်ပြုတ်နဲ့တွဲစားလိုက်ရင် အရသာ အနေတော်ဖြစ်ပြီး စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်။
ကင်ချီကိုတော့ အခုတလော ကလေးလူကြီး အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့အတွက် အအီပြေတွဲဖက်စားလို့ရပါတယ်။
ဆန်ပြုတ်က ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဆားနဲ့ ဟင်းချိုမှုန့်အသုံးများမှ အရသာရှိတဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့အတွက် သွေးတိုးသမားတွေအတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မချက်တဲ့ဆန်ပြုတ်မှာ အသား ငါး ပဲ စတဲ့ အရသာကိုယူပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ ချက်လေ့ရှိတယ်။ အသုတ် အရွက်ကြော်တွေမှာလဲ အရသာပါပြီးသားဖြစ်လို့ တွဲပြီးစားတဲ့အခါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: စမီးလေး ဒီရက်ပိုင်း နေမကောင်းဘူး . . . အာ့ဒေအကုန် ချက်ကျွေးမယ့်သူရှိရင် ကောင်းမှာပဲ
မမချွိ says: နာတို့ စားပုံကြည့်ပြီး ဖျားပြီဆို ရင် ဘယ်သူမှ သနားမှာ မုန့်ဘူးး
အောင် မိုးသူ says: စားချင်စရာတွေချည်းပဲ
kai says: ဆန်ပြုတ်တော့.. မကြိုက်ရေးချမကြိုက်…
မဖျားတာလည်းကြာပြီ..။ ဖျားရင်ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်တောင်မေ့ချင်ချင်…။
ဒီနေ့ ရန်ကုန်က.. ဒေါ်ဒေါ်မမလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့.. ငါးရံခြောက်၂ပြားကို… ရေနဲ့ပြုတ်..သန့်စင်ပြီး ဆီသတ်.. အရက်နဲ့ရော…ချက်စားလိုက်သဗျ..။ ဖျားနေတဲ့ မမချွိ အဲဒါမျိုးစားကြည့်ပါလား..။
မူးပြီးပြန်နိုးလာရင်.. အဖျားအပျောက်ပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
မမချွိ says: စဖျားတဲ့နေ့က Dom သာက်လိုက်တာ နောက်ရက် ချွေးတွေထွက်လို့ မနက်အစောရေလည်း ချိုးပြီး ဂတ်ဂတ်ဖြစ်သွားလို့။
နာ့ ကို သေကြောင်းကြံနေတယ် ကျန်း …. ယူအက်ကွန်ဆာ မြန်မာလစ်ဗျဲကြီးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဆန်ပြုတ်ကတော့ အရမ်းကြိုက်တဲ့အထဲမပါပါဘူး။ အပေါ်က မကြီး ချက်ထားတွေ စားချင်တယ်။
မမချွိ says: အမကတော့ လုံးဝမစားတဲ့ထဲ ပါတယ်။
ကထူးဆန်း says: ဒီပိုစ် print လုပ် မီးဖိုချောင် ကပ်ပေးပြီး ကြက်သွန်နီ ဂျို င်းကြား ညှပ်ချင်လာပြီ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
မမချွိ says: အဲဒီ နေ့ တညားကိုပြောပါ။
နားကြပ်လေး ယူ ဆြာဝန်မ ဟန်ဆောင်လာပြီး အတူစားပေးပါ့မယ်။
may july says: တကယ်နေမကောင်ဖြစ်ရင် ဘာမှကိုမစားးချင်ပါ ..
ဘာမဟုတ်ဘူးး မမချွိ အငွေ့လေးနဲ့ ဖြေသိမ့်နေဒါ .. ဟိဟိ
မမချွိ says: မစားလို့လည်း မရဘူးလေ။
မြစပဲရိုး says: Take care My Dear! <3
မမချွိ says: ကောင်းသွားဘီ အရီးရေ စိတ်မပူနဲ့။
Ma Ei says: လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ထဲကဖျားချင်ချင်
မမချွိ says: ဂစ်ဂစ်။
ကွကိုယ်ချက်စားမှ စားရမှာမို့ နေမကောင်းလည်း ချက်ရင်းစားရင်း စားဖြစ်နေတော့တာ။
weiwei says: ကိုယ်ချက်ထားတာ အဲလောက်တောင် များခဲ့ပါလားလို့ ..
အခုဆို မယ်မယ်ရရ ချက်မစားနိုင်တာကြာပေါ့ .. တစ်မယ်ကောင်းပဲ ချက်ပြီး ဖြစ်သလိုလေး စားနေရတယ် ..
ဆန်ပြုတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး .. အဲဒါစားမိရင် အစာတွေအလွန်ကြေပြီး နောက်ထပ် တစ်ခုခုပြီးတစ်ခု ထပ်စားချင်လို့ အလုပ်ပိုရှုပ်တယ်လို့ ယူဆလို့ …
ခံတွင်းမမြိန်စေသော ဟင်းလျာများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တစ်ပါတ်စာလောက် ရေးပေးပါလို့တောင် တောင်းဆိုရမလိုဖြစ်နေပြီ …
မမချွိ says: အဟီးဟီး
အာ့ဒါ ရေးဖို့တော့ အားပေးရတော့မယ်။
weiwei says: အခုဖြစ်နေတာက ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် စားလို့ကောင်းနေတာ ..
ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကြက်ဥကြော်တစ်မျိုးထဲနဲ့တောင် ထမင်းတွေက ပြိုက်ကနဲ ..
မွသဲ ( 17082011 ) says: နေမကောင်းရင်အမုန်းဆုံးအစာပြောပါဆိုဆန်ပြုတ်ပဲ
ခိခိ နေကောင်းရင်နော့ ဆန်ပြုတ်မျိုးစုံပြုတ်စားတယ်
Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ငင့် ဘယ်လိုရီပလိုင်းအောက်ရောက်သွားတယ်မဆိုသာဘူး